Ungayithumela njani imifanekiso kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayithumela njani imifanekiso kwi-twitter?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 288
Thumela a Tweet ngomfanekiso Yenziwa ngokulula nangokukhawuleza, kokubini ukusuka kwisicelo nakwiqonga lewebhu.
Zeziphi iimfuno ekufuneka imifanekiso yabelwe kwi-Twitter?
Imifanekiso ayinakodlula i-5 megabytes ngokobunzima. Kwinguqulo yewebhu ye-Twitter, i-GIFS inokuba nobunzima obukhulu be-megabytes ezili-15, ngelixa i-App ingu-megabytes ezi-5 kuphela.
Iifomathi ezamkelweyo yi-Twitter zii-GIF, JPEG kunye nePNG, ke iifom ze-BMP kunye ne-TIF azixhaswanga. Isisombululo somfanekiso siya kuhlengahlengiswa kwisikali seTwitter, ukuze ibonakale kwizikrini ezahlukeneyo zezixhobo.
Inkqubo iboniswe ngezantsi:
Ngena kwiakhawunti yakho Twitter
Ukuba ufaka iakhawunti yakho ngokusebenzisa iApp, yiya kwi-Tweet qamba icon ebekwe ezantsi kwesikrini.
Ukuba ungena kwiqonga lewebhu, khangela ibhokisi yokwakhiwa kweTwitter, ebekwe phezulu kwindawo yokujongana, Ngaphezulu kwexesha lakho
Cofa kwiifoto kunye neevidiyo icon ebekwe ezantsi kwebhokisi. Yimpawu yokuqala efumaneka kuloo mgca weempawu.
Ifestile yokukhangela iya kubonakala. Khangela umfanekiso ofuna ukwabelana ngawo, ukhethe ngokuchofoza kabini kumfanekiso okanye ucinezele ukwamkela emazantsi ekunene kwefestile.
Umfanekiso okhethiweyo uza kuboniswa kwibhokisi ye-Tweet.
Uza kubona i-X kwikona ephezulu ngasekhohlo ukuphelisa ucinga kwaye uphinde inkqubo.
Uya kuba nakho ukongeza inkcazo kumfanekiso ofuna ukwabelana ngawo. Kwikona esezantsi ekunene yomfanekiso. Xa ucinezela i icon "yokongeza inkcazo", iwindow iya kuvela ikubonise umfanekiso embindini wentengiso, kwaye ezantsi ibhokisi apho ungabhala khona inkcazo.
Isicatshulwa kufuneka sibe namagama ayi-1000 ubuninzi. Nje ukuba ugqibile ukubhala inkcazo, cofa kwi icon "eyenziwe" ukuya kwikona ephezulu ngasekunene kwefestile.
Kule festile inye uya kuba nokukhetha ukuhlela ubungakanani bomfanekiso.
Ukugqiba upapasho, cinezela "papasha" i icon kwikona esezantsi yebhokisi.
I-tweet iya kuboniswa kumgca wakho we
Ngaba kunokwenzeka ukuba ucime umfanekiso ekwabelwana ngawo kwiTweet?
Ungasusa nawuphina umfanekiso owabelwene ngawo kwi-Tweet okanye kwi-Tweet, ukuyisusa kwi-icon ye-ellipsis emithathu ebekwe kwikona yayo ephezulu ngasekunene.
Thega abantu emfanekisweni
Unokumakisha iakhawunti kwimifanekiso owabelana ngayo, cinezela nje "Maka abantu" kwikona esezantsi ekhohlo yomfanekiso.
Iwindow iya kuvela, apho unokukhangela khona iakhawunti yomntu ofuna ukumaka. Nje ukuba ibekwe, cinezela i "ready" icon kwindawo ephezulu ngasekunene kwefestile.
1 Zeziphi iimfuno ekufuneka imifanekiso yabelwe kwi-Twitter?
2 Inkqubo iboniswe ngezantsi:
3 Ngaba kunokwenzeka ukuba ucime umfanekiso ekwabelwana ngawo kwiTweet?
4 Thega abantu emfanekisweni
Ndifuna ukukhuphela iividiyo kwi-Instagram. Kodwa andazi ukuba ndenze njani.
Ndihamba kanjani kwiTwitch kwiXbox One?